Siwasebenzisa Kanjani Amathuluzi Omphakathi Emsebenzini | Martech Zone
ULwesithathu, May 29, 2013 ULwesithathu, May 29, 2013 Douglas Karr
Esifundweni esivela kuMicrosoft ngomhlaka Ukusetshenziswa Kwamathuluzi Omphakathi kanye Nemibono ebhizinisini, kubonakala sengathi sebembule okwamanje ubufakazi obengeziwe ukuthi abesifazane bahlakaniphe kakhulu kunabesilisa.
Abesilisa banamathuba amaningi okuthi abesifazane bathi le mikhawulo ingenxa yokukhathazeka kwezokuphepha, kanti abesifazane banamathuba amaningi okusola ukulahleka komkhiqizo.
Ugh. Kuyishwa ukuthi, emva kwalesi sikhathi sonke, sisenabantu abathile emsebenzini kukhubaza ikhono ukuze abasebenzi basebenzisane, bacwaninge futhi bathuthukise umkhiqizo wabo. Ungaliboni iqiniso lokuthi, ngokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi, uyakwazi ukufinyelela kontanga, ochwepheshe, abathengisi kanye nochwepheshe akuyona into ehlazisayo kulezi zinsuku. Futhi ngaphandle kokuthi unabasebenzi okufanele bashiye ama-smartphones abo emotweni yabo, banokufinyelela ezinkundleni zokuxhumana. Uma beyisebenzisa kabi, impendulo akuyona ukuvimba ukufinyelela kwawo wonke umuntu… impendulo ukuxosha isisebenzi.
Tags: -MicrosoftUkukhiqizasocial mediasocial networkingukutadisha emsebenzini
I-LuckyMetrics: Ukulandelelwa Kokusebenza Kokusesha okukhokhelwayo okulula
UJun 9, 2013 ngo-11: 30 AM
UDouglas, lokhu bekukuhle! Bengifuna okuthunyelwe nge-spin yokuxhumana nomphakathi kokuthunyelwe kwami ​​kwama-4 HR Blog masonto onke (izintandokazi zami zesonto) futhi nakanjani ngizokufaka lokhu. Siyabonga ngokwabelana ngolwazi.